IRI JI ỌHỤRỤ/ ỊWA JI N'ALA IGBO - Eastern Reporter
October 17, 2018 easternreporter	0 Comments Igbo, Ndigbo, Ohanaeze Ndigbo
IRI JI ỌHỤRỤ/ ỊWA JI N’ALA IGBO: ọtụtụ ihe i kwesịrị ịma maka ya. Na nnukwu ihe mmụta dị na ya!
Ụmụnna kwe nụ! Yaa!
Kwe zuo nu! Yaa!
Onye ilo anyị biri, ma anyị biri
Onye anwụna, ma ibe ya efula
Ogburu onye na onye ga-ala
Njọ na njọ zukwara
Mma na mma zukwara
K ‘anyị rie ji ọhụrụ afọ a n’udo
Nke sị ibe ya ebela nku kwa kwaa ya.
Nke a bụ abụ ekele eji ebido Ịwa Ji ọhụrụ, anyị ji ya bido tata maka na ihe anyị chọrọ ikwu maka ya bụ emume omenala jikọrọ Igbo nile ọnụ. Ihe a ga-eji tụnyere Emume a bụ Ekeresimesi ndị otu Kristi, otu o siri jikọọ ndị Otu Kristi ọnụ ka Ịwa Ji siri Jikọọ Ndị Igbo ọnụ. Emume a dịbara gboo gboo, akụkọ gbasara mbido Ndị Igbo na Ji na-eso onwe ha. Mgbe n’teghị aka m ga-akọ akụkọ gbasara otu Ji siri bata n’ala Igbo. Ihe odide nke tata ga-abụ maka ime K ‘anyị mara maka nnukwu omenala a, na uru ọ bara n’ala anyị. Anyị ga-ebido n’usoro ya bụ emume.
USORO ỊWA NA IRI JI ỌHỤRỤ
Dịkà anyị siri mara emume a bụ nke eji enye Chukwu ekele maka ihe ọma o mere site ime ka Ji etinyere n’ala mepụta ihe a ga-eri n’afọ. A na-eme ya otu ugboro n’afọ. Obodo dị iche iche nwere aha ha na-akpọ ya, aha dị iche iche a na-akpọ ya bụ; Emume-Ifejiọkụ, Ịwa-Ji, Emume-Afịaọlụ, Emume-Ahịanjọkụ, Iro Ọfọ màọbụ Ọfala wdg. Nkụ dị na mba na-eyere mba nri, emume a, obodo dị iche iche na-eme ya ụbọchị ahịa ha. O nweghị ụbọchị amachiri sị na ọ bụ ụbọchị ahụ ka ọ ga-abụ. Mana ọ na-adanye n’ọnwa Ọgọọstu. O nwere ndị nke ha na-adanye n’ọnwa ọzọ?
N’emume a, onye isi ofufe aja na-abụ “Oji Ọfọ” màọbụ “Ọkpara” nke obodo ahụ. Onye ahụ ga-abụ onye a na-ahụ dịkà onye ya na eziokwu gbara akwụkwọ, onye ji ikwụba aka ọtọ were hibe isi ya. Emume a na-abụ n’ama obodo ka ọ na-akpọtu. Ukwu ogirisi, màọbụ Egbu, màọbụ Agbọsị bụ ebe a na-anọ eme kọba ihe omenala dị na ya. Ihe eji eme omenala dị na erim Ji ọhụrụ bụ ndị a, ji kacha were gbaa agba nke Diji wetere, nnukwu oke ọkpa(cockerel), Ọjị, ite mmanya gasị, ose Ọjị, nzu, edo(red chalk), nchara(yellow chalk).
EMUME ỊWA NA IRI JI ỌHỤRỤ.
Onye isi ofufe ga-ewete otu mba-ji, ka ọ na-awa ya ụzọ anọ, ọ ga na-agụ màọbụ na-ekwu ihe nke a;
Ji ọhụrụ nke afọ a, anyị na-egwuwa gị taa ta
Anyị na-awa gị ebe a ụzọ anọ,
Anyị ahụla ka i na-acha ziiii.
Njọkụ nwee ji, gbara ọsọ bịa Njọkụ,
Gozie Ji a, mee k’otu ji mụta anọ,
Ń’imē ọba onye ọbụla n’ime anyị.
Ndị ichie lele nụ Ji ọhụrụ, soro kwere ma rie.
Yaa! Isee !
Na ngalaba osisi a na-akpọ, ‘Otiri’ gbara mkpịrisị anọ, Onyeisi aja ga-arụnye ji ọhụrụ ahụ e kewara ụzọ anọ, ka ọ na-eme nke a, ọ ga na-atụ mbem a:
Otiri aja(sacrifice), osisi di mma, otutu aja ama ama!
Obu aja, anyị etinye ibe ji ọhụrụ ndị a
Na ngala ano gị ndị a, bugara ya Igwe(Sky god),
Ka o were obi ebere mee ka Ji anyị amịkpọna,
Ka mmiri na-ayọsị, ka ji anyị rue nnukwu buru ibu
Ka añụlị bụrụ nke anyị n’afọ a.
O tinye oke ọkpa(cockerel) mma n’akpịrị, bee ya onu, were ọbara ya tee n’ala nke Nwa Ala Ubi(yam god). Ka ọ na-eme nke a ọ na-arịọ na-ekwu:
Ahịanjọku JI, Nwa Ala Ubi, udo o, udo dịrị gị!
Nke abụ Ji ọhụrụ, nke abụ ọkụkụ anyị nyere gị,
Bịa rie Ji ọhụrụ K ‘anyị si eri ya taa
Gozie anyị, gozie ezinụlọ anyị, n’ubi anyị.
Nye anyị Ji n’uju, mee k’obodo anyị,
Rụpụta Ji nke ukwu,nweta ndị Diji n’obodo anyị,
Ndị ọgaranya, ndị bara eze site n’ọrụ Ji.
Ka nke a mechara ndị okenye na ndị na-arụ n’okwu arụsị ga-abanye n’ime, were ọkụkụ ahụ egburu egbu na ji ahu e wara ụzọ anọ. Ụfọdụ bu ndị nke a ga-ahụ n’oku were mmanụ rie ya. Ebe Ji ndị ọzọ ka a ga-esinye ya na oke ọkpa maka ndị okenye. Ha na-erikọ ya ọnu ka o were gosi ịdịkọ n’otu.
Nke a bụ ngwụsị emume omenala dị na Ịwa-Ji. Mgbe ndị okenye na ndị isi nchu aja mesiri emume a, a pụtazie n’okwu arụsị(shrine), ebe nile ga-enwuru ọkụ. Ụmụ nwanyị ga na-esi na ebupụta nri ji, ma nke a sụrụ asụ na nke e siri esi. Ụmụ nwoke ebupụta ite nkwụ ha, onye obula nwere ike ịñụsasị anya ma rifee oke afọ ya. Mmanwụ dị iche iche ga-apụta n’ọgbọ egwu, na-eme ire ha, ebube agụ na-eche agụ.
Emume a bụ nke inye ekele maka ihe ọma Chukwu mere obodo site ime ka ihe e tinyere n’ala mee nke ọma. A na-esikwa na ya rịọ ya ka o mee ka nke afọ na-abịa abịa ka mma karịa ndị gara aga. Ndị obodo nile na-agbakọ maka nke a, etu ọ dị n’Akwụkwọ Nsọ ebe e kwuru, ‘ebe mmadụ abụọ màọbụ atọ gbakọrọ n’aha m, ebe ahụ ka m nọ”, etu ahụ ka ọ dị n’omenala Ndị Igbo.
N’ikpeazụ ebumnobi m bụ ka anyị chékwaba omenala anyị nile o kachasị ndị nke dị mma, ka njirimara anyị hapụ ịbụ ihe e kpofuru ekpofu maka na anyị na-achọ ịka ndị ọcha were eme oyibo. Anyị kwesịrị ịghọta omenala anyị, ma ghọtakwazie ihe kpatara eji eme ha. Kaba kwa ahụ mee ka ụmụ aka anyị ghọta njirimara Ndị Igbo nile.
Ya gaziere anyị nile.
← ỊGỤ AHA NA ALA IGBO
What Buhari said about 2019 election and Fayose during Fayemi’s swearing-in →